चौधरीको प्रश्न– प्रचण्डले के चाहेर पार्टी एकता गरे, के नपाएर फुटाए ? – Nepal Press
चौधरीको प्रश्न– प्रचण्डले के चाहेर पार्टी एकता गरे, के नपाएर फुटाए ?
२०७७ पुष १५ गते १५:३१
काठमाडौं । श्रम तथा रोजगारमन्त्री गौरीशंकर चौधरीले आफू केपी ओलीको पक्षमा लागेपछि प्रचण्ड आत्तिएर अनर्गल प्रचारमा उत्रिएको आरोप लगाएका छन् । नेकपाको सदुरपश्चिम प्रदेशस्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै चौधरीले बाह्य शक्तिको चलखेलमा प्रचण्डले पार्टी फुटाएको टिप्पणी गरे ।
कार्की पार्टी प्यालेसमा आयोजित भेलामा उनले भने–प्रचण्डले के चाहेर पार्टी एकता गरे र अहिले के नपाएर पार्टी फुटाए रुइतिहासले साबित गर्नेछ । मलाई प्रधानमन्त्रीले सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर दिएपछि प्रचण्ड आत्तिएका हुन् ।
तत्कालिन माओवादीबाट निर्वाचित चौधरी प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षबाट अन्तिम घडीमा ओली पक्षमा लागेका थिए । उनी अर्को पक्षको बैठकमा समेत सहभागी थिए । चौधरी ओली पक्षमा लागेपछि कैलालीमा उनको विरुद्ध अर्को पक्षले आक्रामक अभियान चलाएको छ ।
कैलालीबाट निर्वाचित तत्कालिन माओवादीका दुवै नेता लेखराज भट्ट र चौधरी ओलीतिर लागेका छन् ।
#श्रम तथा रोजगारमन्त्री गौरीशंकर चौधरी
प्रकाशित: २०७७ पुष १५ गते १५:३१